Dermatologists Job incazelo / Uxanduva Template And Iindima – JobDescriptionSample.org
ekhaya / Akohlulwanga / Dermatologists Job incazelo / Uxanduva Template And Iindima
superadmin Isilimela 28, 2016 Akohlulwanga Shiya amazwana 707 Views
ukubona, aphathe, nokuncedisa ekuthinteleni izifo ezahlukeneyo ngesikhumba okanye izifo.
Balisa abaxhasi kwezinye iingcali, asneeded.
Bhala abantu’ amarekhodi zempilo.
Nika sokuhlola dermatologic kwezinye abaphandi zonyango.
Funda iincwadi into ekhoyo, nokubonisana omaziyo, athabathe inxaxheba kwiindibano okanye neenkampani abafanelekayo ukugcina benolwazi izixhasi in dermatology.
Cinga abantu ukuba ukuqinisekisa isiqinisekiso ubuchule makeup ezifana liposuction, lazer ablation, kunye microdermabrasion.
Phumeza okanye ukufumana iimvavanyo zokuqaphela iingxaki ezifana umzekelo radiographs zesifuba (-X-reyi), iimvavanyo microbiologic, neemvavanyo endocrinologic.
Iimvavanyo zokuChonga ukuba Nokucebisa ngokuxhomekeke abantu’ iirekhodi kunye nezigqibo zeemviwo real.
Nika amayeza kubandakanya intralesional banikwa, ezibolayo chemical, kunye nonyango comodo ukunyanga ulusu sonakaliswa, ilanga umonakalo, yesikhumba esikhoyo esirhabaxa, amabala ubudala, okanye isikhumba kutyetyiswa.
Phakamisa amayeza afanelekileyo kuquka antiandrogens benzoyl peroxide, corticosteroids ngomlomo rubbers, kunye nemithi okanye ii-arhente hormone.
Injongo utyando kwesikhumba ukuze uphucule inkangeleko, ukudala abheke ukuba ekuqaleni, okanye ukusingatha ukuphazamiseka ezifana umzekelo nomhlaza wesikhumba.
Injongo wolusu ukuze axilonge biopsies incisional.
Lokuxilonga ukulungisa amanxeba ezifana umzekelo othandwayo wolusu wafumana, nevi naso, dysplastic nevi nevi-orenji, kunye nevi.
Advice abantu ngemiba efana ukuxhomekeka iimvavanyo minyaka dermatologic, wokukhusela ilanga, isikhumba imihlaza abalazi, okanye iimviwo self ulusu kunye nkovu node.
Phumeza uvavanyo entanjeni isikhumba.
Chonga nokusingatha iimeko isikhumba inkwethu, umzekelo iqhakuva, umdlali zisaqala, ukhwekhwe, nomhlaza.
abaxhasi abakhoyo kunye liposuction kuncedwa.
Xelela abafundi okanye abemi izifo dermatological ekufumaniseni, aphilise.
uphando ukuziphatha clinical okanye esisiseko.
Inkcaza dermabrasion lingonakali ukuze anyamekele yokwanda yayenze, yayenze atrophic, okanye ezinye iimeko isikhumba.
Ukufunda imigca Ulwazi-Ukuqonda kunye nemihlathi kuphekelwe umsebenzi wokubhala ezihambelana.
Ukuphulaphula-To Active into nabanye-abantu bathi ukunikela ingqalelo yonke, ukufumana ixesha ukuba uqaphele ukuba wenza izinto, imibuzo imibuzo ngendlela eyiyo, yaye emlonyeni iimeko ezingafanelekanga.
Ukudala-Ukuthetha ngendlela eyiyo yokubhala elifanelekileyo iintswelo abaphulaphuli.
Uxoxa-Ukuthetha nabanye ukuba ukwabelana data eyiyo.
Yokalo emileyo-Ukusebenzisa imathematika ukusombulula imiba.
ubuchule kunye nemigaqo zobugcisa ukulungisa iingxaki zophando-Isebenzisa.
Critical-UkuCinga-Ukusebenzisa sizathu kunye nesizathu ukuchonga ubuthathaka kunye eziluncedo kwezisombululo lokuzikhethela, ngeziphumo okanye iindlela ukuba iingxaki.
Active Learning-Knowledge iziphumo leefekthi ezintsha elizayo nganye kunye kwezigqibo zokusombulula iingxaki langoku.
Ukufunda Iindlela-icholwa kunye nokusebenzisa ubuchule kunye unyango trainingANDeducational elifanelekileyo ekuqeqesheni meko okanye xa befunda izinto ezintsha.
yokusebenza-TrackingORDetermining esweni abanye abantu, wena, okanye iinkampani zithathe amanyathelo olungiso okanye ukwenza intuthuko.
Social Perceptiveness-Ukwazi othersA utyekelo kutheni mabaziphathe kuba benza kunye nolwazi.
Control-Ukutshintsha izenzo ngokunxulumene othersI ukuziphatha.
Marketing-biha abanye ukuphucula yokuziphatha okanye ubuchopho babo.
Mediation-Ukuthatha abanye kunye yaye befuna ukuba abuyisele ombane.
Ukuncedisa-Uqeqesho abanye indlela-ukuba bafudukele.
Orientation-Ukuthatha Company uzama ukufumana iindlela ukunceda abantu.
Complex ukusombulula iingxaki Ukwazi ukuntsonkotha Kwiinzingo nokuhlaziya iinkcukacha ezinxulumene ukuphumeza iimpendulo uze uhlolisise nokuvelisa ukhetho.
Amashishini Evaluation-Ukuhlolisisa ngumba isisombululo kwaye ufuna ukudala isimo.
Engineering Design-Building okanye iimveliso esalo nobunjineli ukukhonza umntu kufuna.
Izixhobo Ukukhethwa-Echaza uhlobo kwezixhobo kunye nezixhobo ezifunekayo ukwenza umsebenzi.
Ifakela-Ukongeza koomatshini, izixhobo, iingcingo ezihamab phantsi, okanye iipakethe ukuze anelise specs.
Development-Ukudala izicelo computer ngenxa yezizathu ukuba ezahlukeneyo.
Imisebenzi umkhondo-ukubuka ubiza ulinganisa, okanye izikhombisi ezongezelelweyo maza ukuqinisekisa kukho izixhobo ezisebenza ngempumelelo.
Imisebenzi kunye nemisebenzi Handle-Ukulawula izixhobo okanye iinkqubo.
Izixhobo Ulondolozo-Ukuzifezekisa umsebenzi wazo wesiqhelo kwimveliso kunye nokuchonga nini kwaye yintoni uhlobo zokukhwelisa kuba yimfuneko.
Zokusombulula-Ukukhetha izizathu ukulawula iimpazamo kwaye ukhetha oko ulwalathiso ukuya ngayo.
izixhobo Ukubuyisela-Balungisa okanye izixhobo usebenzisa izixhobo eziyimfuneko.
Ulawulo Quality Evaluation-oLawulayo iimviwo kunye neemviwo izinto, abanikezeli, okanye amacebo ukuze azivele esemagqabini impumelelo.
Ubulumko Decision Making-Thathela ingqalelo amaxabiso ezinokuthelekiswa kunye iingenelo izinto ziyenzeka ukufumana enye zivunywa.
Systems Analysis Ukwazi oko kufuneka asebenze uhlobo nkqubo indlela ukuphuculwa izifo, iinkqubo, kananjalo indawo zingachaphazela iziphumo.
Ndlela Uhlalutyo-zokwahlula iindlela okanye amaza yokusebenza kwenkqubo kunye amanyathelo afunekayo kakhulu ukunyusa okanye ukusebenza ekunene, xa kuthelekiswa neethagethi zenkqubo.
Ixesha-Management-Ukulawula mzuzu labucala kunye nabanye’ ixesha elinye.
Administration of Financial Resources-isigqibo imali iya kungekudala kuzanywa indlela yokufumana umsebenzi kufezwa, kunye ukugcinwa malunga nezi ndleko.
Ulawulo Content asethi-Niyenze nokufumana kusetyenziswe ezifanelekileyo lwezixhobo eziluncedo, kunye zokwakha izinto kwafuneka imfuneko ukwenza ezithile zisebenza.
Kweliso Abasebenzi Resources-kukhuthaza, ekudaleni, nokukhokela njengoko besenza, ekuboneni abantu ezingcono kakhulu umsebenzi wakho.
Engaphezulu kwe 2 iminyaka, kangangoko kwaye kubandakanya iminyaka EZINE
Imfuneko Umsebenzi Control Skills
Impumelelo / Umsebenzi – 86.78%
nenamandla – 88.63%
umzamo – 87.42%
Authority – 91.04%
Cooperation – 91.56%
Naka Abanye – 93.48%
Positioning Social – 89.03%
Ukuzibamba – 90.78%
pressure Tolerance – 92.12%
ukuthembeka – 94.20%
Jolisa aspect – 95.80%
ingqibelelo – 97.20%
Development – 89.79%
sicinga – 91.70%